Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Myanmar Engineers Forum The Myanmar Environmental Forum • View topic - ငွေပေးရင်အစိုးရဌာနတွေကို ခိုင်းချင်သလိုခိုင်းလို့ရတဲ့သက်သေ
by acmv » Thu Oct 10, 2013 9:32 pm
ငွေပေးရင်အစိုးရဌာနတွေကို ခိုင်းချင်သလိုခိုင်းလို့ရတဲ့သက်သေ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ပန်းဆိုးတန်းမှတ်တိုင်ရှေ့ တိုကျိုဒိုးနပ်ဆိုင်ရှေ့ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုက်လိုင်းမီးကြိုးဘယ်လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးရဲ့ အမိန့်နဲ့ သွယ်တန်းထားတာလဲ .. ဆိုတာထက် ကျောက်တုန်းကြီးတွေ ကိုတိုက်မိတဲ့ ခရီးသွားများအတွက် အန္တရာယ်များသလို တိုက်မိခဲ့ရင် ထိုခရီးသွားများ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ accident ကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူမှာလဲ . .. တိုကျိုဒိုးနပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က တာဝန်ယူမှာလား . . အစိုးရဖြစ်တဲ့လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူမှာလား . . .သို့တည်းမဟုတ် မြို့တော်စည်ပင်က တာဝန်ယူမှာလား . . . . ရန်ကုန်မြို့ဟာ အခုအထိ အာဏာရှင်စနစ်မပပျောက်သေးဘဲ အစိုးရာသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို ငွေပေးရင် လီးတောင်စုတ်ခိုင်းလို့ရသလိုဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကျနော် ပြောရင် ရိုင်းသလား သူတို့လုပ်နေတာတွေက ၇ိုင်းသလား . .ဆိုတာ ကျနော့်တင်ပြလိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံကသက်သေပဲမဟုတ်လားဗျာ။ ဒီလိုလူသွားပလတ်ဖေါင်းပေါ်မှာ ကန့်လန်ခံကျောက်တုန်းဟာ ခရီးသွားတစ်ယောက်အတွက်အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ်အန္ဓာချွတ်ယွင်း နိုင်တယ်ဆိုတာ အသိဉာဏ်ရှိသူတိုင်းသိပါတယ်ဗျာ။ ဒီလိုမျိုးကိစ္စ ဆိုတာ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းတာကိုလက်သင့်ခံတဲ့သူရော ကာယကံ ရျှင်တွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်အများအကျိုးအတွက် အချိန်ကုန်ခံအပင်ပန်းခံပြီးပြောတာပါ။ ကျနော်မနက်အလုပ်သွားရမယ် နောက်ကျနေပြီ။ လိုင်းမကောင်းလို့စောင့်တင်နေရတာပါ။ အခုပဲ နံက်(၁း၅၀)မီနစ်ရှိနေပါပြီဗျာ။ အားလုံးတာဝန်သိစွာနဲ့ ၀ိုင်းရှယ်ပေး ခြင်းဖြင့် ပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်ပါ။
\_ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား တိုးကြီး